Njikọ okpomọkụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Njikọ okpomọkụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Nnọọ na Paradaịs jikọrọ ọnụ! Kwadebe onwe gị maka njem ugbo ezinụlọ jupụtara na ihe omimi na agwa pụrụ iche. Nyere ndị obodo aka ịchekwa mmiri mmiri paradaịs ha ka ha na-arụzigharị agwaetiti ahụ ma na-eto ugbo ebe okpomọkụ gị. Gaa na njem iji chọpụta agwaetiti ndị ọzọ wee dozie ọbụna ilu ndị ọzọ. Echefula ohere gị iji wuo ugbo ebe okpomọkụ zuru oke!
– Eserese mara mma na ọdịdị ala mara mma;
– Tọn ihe iji jikọta na ikpokọta;
– Ihe ịma aka kwa ụbọchị na ụgwọ ọrụ dị egwu;
– Ọtụtụ ụlọ a ga-arụ na akụrụngwa iji tolite;
– Ọnụ ahịa kacha mma maka owuwe ihe ubi gị bara ụba gbanwere;
– Ọtụtụ ajụjụ na akụkọ ị na-agaghị echefu!
Ihe ndị a na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ na-eme ka Paradaịs jikọrọ ọnụ bụrụ klondike zuru oke nke ihe omume na ahụmịhe n'ọnụ mmiri! Bido nụ ụtọ egwuregwu egwuregwu n'efu a ugbu a wee nweta ihe kacha mma na mgbapụ ebe okpomọkụ gị!
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Jikota, Tropical
← Mahjong Tour: Witch Tales – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Mahjong Club – Solitaire Game Cheats&Mbanye anataghị ikike →
Gunshot Run – Action Shooter Cheats&Mbanye anataghị ikike